Soomaaliya oo ka dalbatay dalalka midowga Yurub in la soo de-dejiyo dhaqaalihii New deal – Radio Daljir
Soomaaliya oo ka dalbatay dalalka midowga Yurub in la soo de-dejiyo dhaqaalihii New deal
Nofeembar 27, 2013 2:48 b 0
Brussels, November 27, 2013 – Wasiirka arrimaha dibeda ee Soomaaliya marwo Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa weli ku sugan? magaalada Brussels ee dalka Beljium, halkaas oo uu ka socdo shir lagaga hadlayo horumarinta Yurub isla markaasna lagu casumay madax ka socda caalamka.
Marwo Fowsiyo ayaa kulamo kala duwan kula qaadatay Brussels madaxda midowga Yurub iyo qaar ka mid ah ka soo qayb-galayaasha shirka ka socda Brussels.
Wararka ka soo baxaya kulamada wasiirka arrimaha dibedda ee Soomaaliya Marwo Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan ay la qaadatay madaxda Yurub, ayaa lagu sheegay in wasiirku ka dalbaday dalalka Yurub? in la dardar geliyo taageerada reer Yurub ay u hayaan Soomaaliya.
Fowsiyo ayaa ka dalbaday dalalka midowga Yurub in la muujiyo isla markaasna la soo de-dejiyo heshiiskii Compact dhaqaalihii lagu saxiixay Brussels bishii September ee ina haaftay, waxay tilmaanay in dalalka Yurub ay dadaal ugu jiraan soo kabashada Soomaaliya.
Marwo Fowsiyo ayaa khudbad ay ka jeedisay Brussels waxay ku tiri ?midowga Yurub waa saaxiib dhowr oo ay Soomaaliya ku leedahay calaamka.? Isla markaasna wasiirka ayaa u mahadcelisay dalalka Yurub
Ugu dambayntii wasiirka arrimaha debeda ee Soomaaliya ayaa sheegtay in Soomaaliya muhiimada siinayso in shaqo iyo dhiiri-gelin loo sameeyo haweenka iyo dhalinyarada dalka, kuwaas oo wax wayn ka bedeli kara mustaqablka Soomaaliya hadii kaalin wayn la geliyo.
Prof. Jawaari oo degniin u diray xildhibaada maqan xili ra?isal wasaaruhu hortegayo baarlamanka